गठबन्धन वा कार्यगत एकता - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ २२, शनिबार १०:५९
अहिले ओलि सरकार प्रकट रूपमा नै असंवैधानिक, व्यक्तिवादी, अधिनायकवादी, स्वैच्छाचारी र प्राधिकारवादी तवरले अगाडि बढीरहेको छ। ओलि सरकारको यस प्रकारको चरीत्र प्रतिक्रियावादी चरीत्र नै हो। यो कुरा सत्य हो कि ओलि सरकारको यो प्रतिक्रियावादी कदम विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता छ। यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न तयार हुने शक्तिहरुबीच सहकार्य, गठबन्धन एवं कार्यगत एकताको आवश्यकता रहेको कुरा पनि सत्यतथ्य नै हो। तर कार्यगत एकता गर्दा त्यसमा सहभागी विभिन्न शक्तिको वर्गीय सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध, अवस्था, प्रकार उनीहरुको आ-आफ्नो तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ आदि फरकफरक हुन सक्छन्, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर मिल्न सक्ने कुरा वा एजेन्डामा नै कार्यगत एकता भएको हुन्छ र हुनुपर्छ। यसरी नै कुनै क्रान्तिकारी शक्तिलेसमेत आफ्नो रणनीतिको छातामुनि कार्यनीतिक सवालमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विभिन्न देशभक्त, वामपन्थी, अग्रगामी, परिवर्तनशिल मित्र शक्तिहरुसँग मिल्ने साझा एजेन्डामा सहकार्य, गठबन्धन एवं कार्यगत एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कतिपय विशेष परिस्थितिमा ठुला दुश्मन विरुद्ध साना दुश्मन शक्तिसँग पनि कार्यनीतिक सन्दर्भमा तालमेल, गठबन्धन वा कार्यगत एकता गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
ओलि सरकारको प्रतिक्रियावादी चरीत्र र व्यबहार विरुद्ध अहिले विभिन्न गठबन्धनहरु निर्माण भएका छन् भने कतिपय संगठन, संघसंस्थाहरुले त्यस चरीत्रविरुद्ध आ-आफ्नै ढंगले संघर्ष तथा विरोध गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा पाँच दलीय, बाईस दलीय र चौध दलीय गठबन्धनहरु प्रमुख छन्। ती फरकफरक गठबन्धनका पनि फरकफरक राजनीतिक उदेश्य र मान्यताहरु रहेका छन्। अब ती मध्ये क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिले यस्तो बेलामा गठबन्धन वा कार्यगत एकता गर्दा कस्तो नीति अपनाउने? उसले त्यसको परिणामसम्म पुग्दा कुन कुन कुरामा जोड दिने? अहिलेसम्मका स्थापित राजनीतिक अवधारणाको सुरक्षा गर्दै वस्तुस्थिति अनुसार अग्रगामी दिशामा कसरी प्रस्थान गर्ने? सहकार्य, गठबन्धन वा कार्यगत एकतामा यी सवालहरुको महत्वोपुर्ण स्थान रहने गरेको हुन्छ। तिनै सवालको सन्दर्भमा आज आवश्यकता अनुसार फरकफरक गठबन्धन वा कार्यगत एकताका रुपहरु अभिव्यक्त भएका छन्।
पाँच दलीय गठवन्धनमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी प्रचण्ड पक्ष, एमाले माधव पक्ष, जसपा उपेन्द्र पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। यो गठबन्धनको उदेश्यका हिसाबले ओलि सरकारको प्रतिक्रियावादी कार्यको विरुद्धमा लड्न सहमतिको मुख्य मुद्दा सकभर अहिले नै ओलिलाई सत्ताच्युत गरेर काँग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने, त्यो संभावना नभए आगामी चुनावमा ओलिलाई पराजित गर्ने र ओलि इतरका संसदीय शक्तिको संसदमा बिजयी गराउने भन्ने नै रहेको छ। त्यस अनुरुप नै उनीहरुको यो सहकार्य वा गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम राख्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। भोलि चुनाव पछि यदि नेकाको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा यो गठबन्धनले त्यतिबेला सत्ता समीकरणमा समेत सहकार्य गर्नेसम्मको लागि अगाडि बढ्न सक्ने निश्चित नै छ। त्यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले के गर्छ? त्यो त्यतिबेला नै थाहा हुनेछ तर अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि आउँदो चुनावी कार्यक्रमसम्म गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने उनिहरुको प्रस्तावमा सहमत भएको देखिन्छ।
हामी सबैलाई थाहा नै छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा ( मसाल ) को वैधानिक मोर्चा हो। यो गठबन्धनको सहमतिबारे मसालसमेत सहमत भएको प्रष्ट छ। मसालले काँग्रेस र सजपा जस्ता प्रतिक्रियावादी चरीत्र भएका दुश्मन शक्तिहरुसँग यो हदसम्म अगाडि बढ्न गठबन्धन गर्ने जुन सहमति गरेको छ, यो सहमति मसालले आफ्नो विगतको क्रान्तिकारी राजनीति विपरीत गएर निर्णयमा सहमत हुन पुगेको छ। यसले मसालको स्पष्ट रुपमा संसदीय दक्षिणपन्थी राजनीतिमा फस्दै गरेको कुरुप चित्र देखिन थालेको प्रष्ट छ। तर मसालले राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको सुरक्षाको लागि ओलि सरकारको प्रतिगामी कदम विरुद्ध काँग्रेस र सजपासहितको गठबन्धनमा सामेल हुनुपरेको दाबी गरेको छ। त्यसोभए मसालको ठहर यो हुन जान्छ कि ओलि सरकारको प्रतिगमनले देशको राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता खतरामा छ। यो सरकारको गतिविधिले प्रतिगामी राजावादीलाई फाइदा पुग्छ, राष्ट्रियता कमजोर बन्छ र अन्ततः नेपाल हिन्दुराष्ट्र कायम हुँदै राजतन्त्रसम्म पुनःस्थापन हुनसक्छ। र यो संभावित प्रतिगमनलाई रोक्न अन्य विकल्प भन्दा पनि काँग्रेस र सजपासमेतको गठबन्धनले नै यो दुर्घटना रोक्न सकिन्छ भन्ने मसालको ठहर भएको बुझिन्छ।
यसलाई हामीले दुईवटा छुट्टाछुट्टै पक्षमा ध्यानाकषिर्त गरेर ठिक ढंगले विश्लेषण गर्नु र बुझ्न आवश्यक छ। प्रथम पक्ष ओलि सरकारको प्रतिगामी वा प्रतिक्रियावादी कदमले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा खतरा उत्पन्न भएको छ भन्ने जुन सवाल छ, यसमा केहि सत्यता छ। संसदीय मुल्य मान्यता अनुसार पनि पटकपटक असंवैधानिक कदम उठाएर संसद विघटन गरिरहनु त्यो राम्रो पक्ष हुँदै होइन। यसको असर गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षतामा सिधै पर्नजान्छ नै। तरपनि अहिले नै तत्काल गणतन्त्रको खारेजी र राजतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने आधार एकदम कमजोर नै छ त्यस्तो संभावना देखिन्न। त्यसैले मैले यसमा केहि सत्यता भन्ने गरेको छु। तैपनि ओलि सरकारको यस कदम विरुद्ध सहमत हुने सबैसँग मिलेर सडक संघर्ष गर्ने आन्दोलनको उठान गर्ने र ओलि सरकारको प्रतिक्रियावादी कदम सच्याउन दबाब दिने, उसलाई असफल पार्ने र देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्पुर्ण देशभक्त, वामपन्थी, जनतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा अग्रगामी शक्तिबीच सहकार्य, गठबन्धन वा कार्यगत एकता हुनु जरुरी छ।
दोश्रो पक्ष ओलिको प्रतिक्रियावादी कदम विरुद्धको गठबन्धनको नाउँमा धमिलो पानीमा माछामार्ने शक्तिको नेतृत्वमासमेत गठबन्धन बनेको देखिन्छ। त्यसमा काँग्रेस र सजपाजस्ता शक्तिपनि पर्दछ्न्। काँग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनमा सत्ता गठजोड र गणितीय हिसाबले प्रचण्ड पक्ष र माधव पक्षका निम्ति काँग्रेस र सजपाजस्ता दुश्मन शक्तिसँग हातपाउ जोडेर सरकारको नेतृत्व गरिदिनु पर्‍यो भन्दै उनीहरुसँग जानु संसदीय सत्ता राजनीतिमा स्वभाविक मान्न सकिएला तर मसालसमेतले काँग्रेस र सजपासँग चुनावी तालमेलसम्मको गठबन्धनमा अगाडि बढ्न तयार हुनु क्रान्तिकारी दृष्टिले सहि मान्न सकिदैन। किनभने माथि नै भनियो कि राजनीतिक संघर्षको दौरानमा गठबन्धनमा सहकार्य भएपनि विभिन्न वर्गीय चरीत्र भएका शक्तिको आन्तरिक उदेश्य फरकफरक नै हुने गर्दछ। अर्थात् क्रान्तिकारी तथा वामपन्थी शक्तिको राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिक्रियावादी एवं यथास्थितिवादीको राजनीतिक स्वार्थ उहीँ एउटै परिस्थितिमा पनि फरकफरक हुने गर्छ। क्रान्तिकारी एवं वामपन्थीको स्वार्थ वास्तविक रूपमा देशको राष्ट्रियता, गणतन्त्र र जनजीविकाको सवालसँग जोडिएको हुन्छ तर प्रतिक्रियावादी एवं यथास्थितिवादीको वास्तविक राजनीतिक स्वार्थ सत्तालिस्सा एवं सरकारमा आफू स्थापित भएर ब्रमलुट गर्नेसँग नै जोडिएको हुन्छ।
अब काँग्रेस एवं देउवा अथवा सजपा कस्ता राजनीतिक स्वार्थका शक्ति हुन्? के काँग्रेस वा सजपाले चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेपछि अहिलेको प्रतिगमन परास्त हुने कुनै ग्यारेन्टी छ? के सजपा वा उपेन्द्रहरुले बहुमत बनाएर सरकारमा गएपछि देशको राष्ट्रियता माथिको खतरा टर्नेछ? हामिलाई लाग्छ यदि काँग्रेस र सजपाको बहुमत आएर सरकार बन्यो भने झन् सजिलैसँग राष्ट्रियताको सुरक्षाको साटो देश फिजिकरण र सिक्किमीकरणको दिशामा लानेछ्न्। देश झन् प्रतिगामी दिशामा जानेछ। भारतीय विस्तारवादको योजना र दबाबमा जुन कार्य अहिले ओलिले गरेका छन्, त्यसलाई काँग्रेसले समेत निरन्तरता दिने निश्चित छ। मलाई लाग्छ काँग्रेस त्यतिबेला भारतीय विस्तारवादको नीति विरुद्ध जाने हैसियत राख्न सक्दैन। त्यसैले काँग्रेस र सजपासँग कहाँनिर राजनीतिक स्वार्थ मिलेर मसालले राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको सुरक्षाको नाउँमा उनीहरुसँग आगामी निर्वाचनको तालमेलसम्म गठबन्धन गर्ने कुरामा सहमत हुनसक्यो? यो सबैभन्दा गम्भीर र महत्वोपुर्ण प्रश्न हो।
राष्ट्रियताको सवालमा मात्रै होइन मसालको निम्ति काँग्रेस वा देउवा हिजो प्रतिगामीपरस्त वा राजापरस्त शक्ति थिए जसको कारण डडेल्धुरामा उनलाई हराउने नाउँमा चुनावी मैदानमा बरोबर खटिएका आफ्ना उम्मेदवारलाई मसालले ठाडो निर्देशनमा बेसरम अर्थात बेलाज चुनावी मैदान छोड्न लगाएर अहिलेका प्रतिगामी ओलिलाई सघाउनकै निम्ति आफ्ना उम्मेदवारलाई थन्क्याएर राख्नुपरेको थियो। मसालको लागि अहिले देउवा फेरि कसरी अग्रगामी हुन पुगे जसको कारण उनिसँग आगामी चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने? ओलि अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, तानाशाही, प्रतिगामी जे जे भएपनि आज अपरझाट भएका होइनन्। भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार उनको यस्तो योजना पहिल्यैदेखि रहेको भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। नाकाबन्दी र नयाँ नक्सा प्रकरणमा प्रस्तुत भएको ओलिको राष्ट्रवाद नक्कली र लोकप्रियताको लागि रहेको अहिले पुष्टि भएको छ।
उनको त्यहीँ लोकप्रियताको कारण करिबकरिब दुइ तिहाइ बहुमत आउने बित्तिकै नै ऊनी आफ्नो प्रतिक्रियावादी सोचाइको साथ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेका थिए। आफ्नो पार्टी भित्रको संघर्षमा ओलिले अपनाएका व्यक्तिवादी, अनुशासनहिन, सर्वसत्तावादी, प्राधिकारवादी प्रवृत्तिले नै ओलिको अहिलेको बाटो उतिबेला नै प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। यहीँ बीचमा भएको मसालको आठौं महाधिवेशनमा अल्पमत पक्षले ओलि र ओलि सरकारको प्रतिक्रियावादी कार्यशैली र चरीत्रबारे सहि सत्य विश्लेषण गरिरहदा मसाल नेतृत्वले यो देशको संविधानको, राष्ट्रियताको, गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षताको रक्षक ओलि र ओलि सरकारलाई नै ठम्याएको थियो। ओलि सरकारको विरोध गर्ने र यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षलाई भारतका मतियार र रअका एजेन्ट हुन् भन्ने आरोपसमेत लगाएको थियो तर आज अल्पमत पक्षको विश्लेषण सत्यतथ्य सावित भएको छ। मसालको आठौं महाधिवेशनले गरेको ओलि सरकारमाथिको विश्लेषण र निर्णयले हावा खाएको छ। तैपनि मसालले अहिलेसम्म त्यतिबेला गलत निर्णय भएको थियो भनेर स्वीकारसम्म गरेको छैन र गर्ने संस्कार पनि छैन। यो गैरमार्क्सवादी तरिका हो।
तत्कालीन अल्पमतले गरेको विश्लेषण अनुसार आज क्रमश ओलि र ओलि सरकारको प्रतिक्रियावादी चरीत्रको पर्दाफास भएको छ। आज मसालले अर्को बलण्डर गल्ती के गरिरहेको छ भने ओलिले अहिले देखाएको प्रतिक्रियावादी चरीत्रको आधारमा देउवा अग्रगामी देखिरहेको छ। वास्तविक रूपमा देउवा र ओलि दुबै नेपाली जनताका दुश्मन दलाल पुँजीवादका एजेन्ट नै हुन् अझै देउवा प्रतिगामीका पनि एजेन्ट हुन्। ओलिले गल्ती गरेपछि देउवा सच्चिएको कसरी हुन्छ? त्यसैले ओलिलाई देखाएर काँग्रेससँग चुनावी तथा सरकार गठनको लागि तालमेलसम्म तयार हुनु मसालको तीब्र रूपमा संसदीय दलदलमा पतनको दक्षिणपन्थी राजनीति नै हो।
मसालले आफ्नो दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइनको ढाकछोप गर्न अहिले हामिलाई ओलिको पक्ष लिएको तथा ओलिलाई काँधमा बोकिरहेको हास्यास्पद तरिकाले झुठो प्रचारप्रसार गरिरहेको छ। नेपाली जनताको प्रतिक्रियावादी तथा दुश्मन शक्ति नेपाली काँग्रेस र सजपासँगको चुनावी तालमेल तथा सत्ता समीकरणको तालमेलको नीति सम्बन्धमा मसालले औचित्यता प्रष्ट पार्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्ने बाटो नपाएर वा नसकेर हामिलाई ओलि कदमको समर्थन गरेको आरोप लगाइएको छ, हामीले उसका गलत कदम सच्चाउन दिएको सुझावलाई पार्टीमाथिको आक्रमण सम्झन्छ र हामिलाई “डाँका, फटाहा र बदमाश” भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्चुअल प्रशिक्षण दिइन्छ। यो कुन स्तरको राजनीतिक संस्कार हो। तर हामी अहिलेमात्रै होइन, ओलि सरकारको गठनदेखि नै ओलिको सरकार वामपन्थी सरकार होइन, यो दलाल पुँजीवादी सरकार हो भन्ने कुरामा प्रष्ट थियौं र छौं। ओलिको यो प्रतिक्रियावादी कदम विरुद्धको संघर्ष देशभक्त, वामपन्थी र जनतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको गठबन्धन वा कार्यगत एकताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मत छ। त्यसैले ओलिलाई बोकेर हिडेको भन्ने हामीमाथिको आरोपमा कुनै सत्यता छैन। बरु ओलिले संसद विघटन गरिसकेपछि, एमसीसीको समर्थन गरिसकेपछिसम्म पनि ओलिलाई मसाल नेतृत्वले पो बोकिरहेको दुनियाँलाई थाहा छ। जब कपन दरबारमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले मसाल नेतृत्वसँग भेट गरे तबमात्र मसाल दृढरूपमा ओलि सरकार विरुद्ध आएको घाम झैं छर्लङ्ग छ।
मसालले अहिले गरेको काँग्रेससँगको गठबन्धनलाई सहि तुत्याउन उसले गतकालमा कतिपय कार्यनीतिक सवालमा काँग्रेससँग भएका गठबन्धनलाई देखाउने गरेको छ। विशेषगरी २०४६ साल र ०६२/०६३ सालको आन्दोलन तथा ०५९ सालको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा काँग्रेससँग गठबन्धन भएको कुरालाई देखाएर अहिलको गठबन्धन सहि भएको दाबी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। उतिबेलाको परिस्थितिमा र अहिलेको परिस्थितिमा सतही प्रकारले उस्तै देखिएता पनि वास्तविक तथा गुणात्मक प्रकारले यी दुइ परिस्थिति बीच मेल खाँदैन। हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, राजाको संवैधानिक प्रतिगामी कदम विरुद्धको संघर्ष र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि काँग्रेससँग आन्दोलनको सिलसिलामा गठबन्धन गरिएको थियो। त्यो यस अर्थमा ठिक थियो कि काँग्रेसभन्दा ठुलो दुश्मन शक्तिको संस्थागत व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष र त्यसबाट हुने अग्रगामी परिवर्तनको परिस्थितिको सवालमा काँग्रेससँगको गठबन्धन ठिक थियो। अहिलेको परिस्थितिको वास्तविक विश्लेषण गर्ने हो भने त्यस्तो होइन त्यसको उल्टो परिस्थिति देखिन्छ।
मसालले वर्गीय रूपमा काँग्रेसलाई सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही वर्गको पार्टी अर्थात दुश्मन शक्तिको रूपमा मानेको छ। राजनीतिक रूपमा अहिले पनि काँग्रेस भित्रको देउवा पक्षलाई प्रतिगामीपरस्त एवं राजापरस्त शक्तिको रूपमा विश्लेषण गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा देउवा सच्चिएको वा मसालले उनिमाथिको त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन। त्यसै गरेर मसालले वर्गीय रूपमा एमाले वा ओलिपक्षलाई देशभक्त, वामपन्थी, तर ढुलमुले अवसरवादी मित्र शक्तिको रूपमा मान्दै आएको छ। अहिले ओलिले चालेको प्रतिक्रियावादी कदम मसालको लागि कुनै खास अवस्थामा भएको राजनीतिक प्रकारको प्रतिगामी कार्य नै भएको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा ओलि सरकारको राजनीतिक रुपको प्रतिगामी कदम र देउवामाथिको प्रतिगामीपरस्त या राजापरस्त विश्लेषणमा देशको लागि दीर्घकालीन रूपमा कुन खतरापूर्ण होला? यसमा मसालको विश्लेषण के हो? सायद, मसालको दृष्टिकोणमा पनि दीर्घकालीन रूपमा देउवाबाट नै देशलाई खतरा हुने देखिन्छ होला। त्यसले पनि देउवासँगको गठबन्धन तत्काल ओलिको प्रतिक्रियावादी कदम निस्तेज पार्न वा असफल पार्न संघर्ष गर्ने सवालमा अर्थपूर्ण देखिएपनि चुनावी तालमेल र देउवा सरकार स्थापनासम्म गठबन्धन गर्नुले ०४६/०५९/०६३ साल झैं कुनै अग्रगामी उपलब्धि हातमा लाग्ने देखिन्न। बरु देउवा शक्तिशाली भएपछि देश प्रतिगमनमा जाने खतरा त्यत्तिकै छ। त्यसैले हिजोको विशेष परिस्थितिमा काँग्रेससँग भएको गठबन्धन भजाएर आजको काँग्रेससँगको सत्ता समीकरणको गठबन्धन सत्यतथ्य भएको पुष्टि गर्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन। बरु यो सबै आफ्नो संसदीय दक्षिणपन्थी राजनीति ढाकछोप गर्ने मसालको प्रयत्न मात्रै हो। भविष्यमा यो झन्झन् उदांग हुँदै जानेछ।
नेकपा ( मसाल ) को आफ्नो प्रमुख भुमिकामा रहेको बाईस दलीय गठबन्धन पनि कायम छ। उक्त गठबन्धनमा रहेका कतिपय दल वा संघसंस्थाले अहिलेको यो सम्पुर्ण राजनीतिक अस्थिरता, विकृति एवं विसंगति प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताले गर्दा भएको हो। त्यसो हुनाले जनताले भरपर्दो वैकल्पिक अग्रगामी शक्ति खोजीरहेका छन्। त्यसको निर्माणको लागि अग्रगामी रोडम्यापको लागि प्रयत्न गर्न नौलो जनवादी क्रान्ति एवं जनवादी गणतन्त्रको प्रचारात्मक कार्यक्रम सहित संघर्ष गर्ने प्रस्ताव बाईस दलीय गठबन्धनमा राख्दा त्यसमा मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र सिपि मैनालिसहितका कतिपय संगठनको सहमति हुन नसकेको कुरा बाहिरिएको छ। त्यस एजेन्डामा यी संगठनहरु सहमत नभएको कारण अर्को चौध दलीय छुट्टै गठबन्धन बनेको कुरा नेपाली राजनीतिमा खुल्न आएको छ। मसालले काँग्रेस र सजपासँग कार्यगत एकता र सरकार निर्माणमा समर्थन गर्न मरिहत्ते गर्छ तर नौलो जनवादी क्रान्ति वा जनवादी गणतन्त्रबारे प्रचारप्रसारसम्म गर्नपनि तयार छैन। यसले पनि मसालको दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइनलाई नै प्रष्ट पार्दछ।
अहिले देशमा प्रतिगामी खतरा भएकोले यो एजेन्डामा अगाडि बढ्दा प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुग्ने मसालले जिकिर गर्दै आएको छ। मसाल नेतृत्वले यसलाई “वामपन्थी संकृणतावादी” भनेर आफू नै क्रान्तिकारी भएको बताउने गर्छ। मसाल अनावश्यक रूपमा प्रतिगामी खतराको हौवा खडा गरेर प्रतिगामी राजनीतिक चरीत्र भएका राजनीतिक शक्तिसँग नै गठबन्धन गर्ने आफ्नो दक्षिणपन्थी राजनीतिमा पर्दा हाल्न क्रान्तिकारीहरुलाई “वामपन्थी संकृणतावादी” को बिल्ला भिराउदै आएको छ। वास्तविक रूपमा उसले नौलो जनवादी क्रान्तिको प्रचारप्रसारसम्म गर्न मान्दैन।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिले क्रान्तिकारी उदेश्यहरुलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न तात्कालिक प्रश्नहरुका आधारमा पनि जनसंघर्ष अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। त्यसका लागि कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको आवश्यकता मात्रै पर्दैन, त्यसलाई झन् प्रभावशालीरुपले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता खाली देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुसित नै हुनु पर्दछ। दुश्मन शक्तिहरु र उनीहरुका दलालहरुसित त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतालाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक दृढतापुर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ। यसबारे क्रान्तिकारीहरुको नीति बढिभन्दा बढी उनिहरुबीचका अन्तरविरोधहरुबाट फाइदा उठाउने मात्रै हुनुपर्छ।
संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको सवालमा क्रान्तिकारीहरु एकातिर आफ्नो नीतिगत अडान र अर्कोतिर व्यवहारिक उपयोगिताका बीचको सम्बन्धको प्रश्नमा स्पष्टताको आवश्यकता पर्दछ। यदि यसमा स्पष्टता भएन भने संगठनमा थुप्रै द्विविधा, भ्रम र व्यवहारिक समस्याहरु उत्पन्न हुने गर्दछ। क्रान्तिकारीहरुले संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको लागि देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुसँग अग्रगामी उदेश्यका लागि नै गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई कुल्चेर तात्कालिक व्यवहारिक फाइदाको लागि एक वा अर्को प्रकारले दुश्मन शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता गर्ने झुकाबले क्रमश संगठनको क्रान्तिकारीपना हराउँदै जाने र संगठन विभिन्न भड्कावको शिकार हुने खतरा बढ्दै जान्छ। यसले आफ्नो सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक पक्षको उपेक्षा गर्दै खाली व्यवहारिक उपयोगितावादको दिशामा लैजाने खतरा रहन्छ। आज मसाल क्रमश यहीँ समस्याको शिकार भएको कारण आठौं महाधिवेशन पछि स्पष्ट रूपमा दक्षिणपन्थी भड्कावमा नराम्ररी फस्न पुगेको देखिन्छ।
मेरो आफ्नो विश्लेषणमा मसाल एकाएक आठौं महाधिवेशनमा आएर एक्कासि दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा पतन भएको होइन, मसाल अलिक पहिल्यैदेखि क्रमश नजानिदो ढंगले यो दिशामा आन्तरिक रूपमा पतन हुँदै आयो र यसको प्रष्ट प्रकट रुप आठौं महाधिवेशनले लियो। यसको अर्थ यो पनि होइन कि आठौं महाधिवेशनले दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइन प्रकट रूपमा लिएपनि यसको सम्पुर्ण संयन्त्र दक्षिणपन्थी अझै भएको छैन। अहिलेपनि त्यस भड्कावविरुद्ध अन्तरसंघर्ष गर्ने शक्ति त्यहाँभित्र मौज्दात छ।
छैठौं महाधिवेशन वरिपरिसम्मको मसालको क्रान्तिकारी स्प्रीडमा संसदीय व्यवस्था उपयोगितावादको मन्द विषले क्रमश खिया लगाउदै गयो। संसदीय व्यवस्थाका जननिर्वाचित विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिले खुल्ला रूपमा संस्थागत रूपमा संसदीय विकृतिमा मुचिनबाट जोगिन पुगेपनि सिंगो संगठनका नेतृत्व, नेता र कार्यकर्तामा सामान्यतया संसद उपयोगीताको मन्द विषको असर पर्न गयो। त्यसले नेता कार्यकर्तामा भएको क्रान्तिकारी स्प्रीडलाई ह्रास गराउँदै लग्यो। केहि सचेत पंक्तिले यसबारे पार्टी संगठनलाई पटकपटक सचेत गराउने कामकारबाही पनि भए। तर नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गर्नु र सच्याउनुको साटो संसदमा भाग लिएर पनि पार्टी क्रान्तिकारी धारमा बाँचिरहेको व्याख्या गर्दै गयो। संसदीय उपयोगितावादको शिकार हुँदै गएको स्वयं पार्टी केन्द्रले नै पत्तो पाउन सकेन। फलस्वरूप गाउँ गाउँमा जनताको बीचमा गएर संगठन निर्माण गर्ने पुरानो स्प्रीडमा ह्रास आउँदै गयो।
नेता कार्यकर्ता शहरमुखी र सुविधाभोगी हुँदै गए। सबैको ध्यान जिविस, एनजीओ र आइएनजीओका बैंककमा तथा फगत विकास निर्माणमा मात्रै धेरै आकर्षक हुनपुग्यो। ०५९ सालमा एकताकेन्द्रसँगको एकता पछि झन्झन् पुरानो क्रान्तिकारी स्प्रीडमा धक्का लाग्न पुग्यो। यसले के बताउँछ भने दुश्मन शक्तिहरुसँगको सहकार्य वा कार्यगत एकता अथवा संसदीय उपयोगितावादमात्रै होइन मित्रशक्तिहरु बीचको गलत ढंगले गरेको कार्यगत एकता वा पार्टी एकताले संगठनका सबै पक्षमा दीर्घकालीन रूपमा कतिधेरै नोक्सान हुँदोरहेछ भन्ने पाठ पढायो। सातौं महाधिवेशनले त्यसको समिक्षासमेत गर्‍यो। आफ्नो पुरानो क्रान्तिकारी स्प्रीडद्वारा पुनः क्रान्तिकारी उर्जा थप्ने निर्णय समेत गरियो । तर दु:खद अवस्था त्यो निर्णय अनुसारको काम हुन सकेन। अनि सुधार पनि हुन सकेन। संसदीय सहभागीताको रुपले क्रमश प्रतिक्रियावादी सरकारमा सामेलीको अवस्थासम्म पुर्‍यायो । आठौं महाधिवेशनले झन् स्पष्ट रूपमा दक्षिणपन्थी दिशा समात्यो। पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा हिडाउन प्रयत्न गर्नेहरू बहुमतको आडमा संगठनबाट नै निष्कासन गरिए र गर्ने क्रम जारी नै रहेकोछ। आज मसाल नेतृत्व अन्धाधुन्ध चुनाव र संसदीय सरकारको जोडघटाउमामात्रै ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ।
आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको यथास्थितिवादी प्रवृत्ति र दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइनलाई चिर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनः गठनको आवश्यकता सृजना भएको छ। एकातिर यो मुख्य र महत्वपुर्ण काम पुरा गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर ओलि सरकारको असंवैधानिक, अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी र अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध संघर्ष गर्न चाहने देशभक्त, जनतान्त्रिक एवं वामपन्थी शक्तिसँग संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
संभावना भएसम्म त्यस मोर्चा वा कार्यगत एकतामा समाविष्ट सबै पक्षसँग तल उल्लेखित एजेन्डामा छलफल सहमति र सहकार्य गर्न निरन्तर स्थायी रुपले प्रयत्न गर्नुपर्छ।
( क ) हाम्रो जस्तो देशमा प्रतिगमनको खतरा जहिल्यै पनि रहने हुनाले त्यसको विरुद्ध संघर्ष गर्ने,
( ख ) अहिलेको संकट वा अस्थिरता संसदीय दलाल प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको भद्दा प्रणालीको उपज भएकोले यसको विकल्प खोज्न बहस र छलफल चलाउने र निष्कर्ष सहित जनताको बीचमा जाने,
( ग ) अहिले तत्काल शान्तिपुर्ण जनसंघर्ष मार्फत संसदीय दलाल व्यवस्थाले स्थापित गरेका भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारसहित विभिन्न विकृति विसंगति विरुद्ध शान्तिपुर्ण हस्तक्षेपकारी संघर्ष गर्ने,
( घ ) नयाँ जनवादी कार्यक्रम, नयाँ जनवादी गणतन्त्र र नयाँ जनवादी सरकारका कार्य व्यवस्थाको प्रचारात्मक आन्दोलनमा जोड दिने,
( ङ ) अमेरिकी साम्राज्यवाद, अन्य सामाजिक साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादका विरुद्धको संघर्षलाई बढाएर लैजाने,
( च ) जनवर्गका विभिन्न तात्कालिक आवश्यकता, आर्थिक अवस्था, जीवन सुधार, सेवा सुविधाको लागि राजनैतिक मागहरूको आधारमा जनसंघर्ष एवं वर्ग संघर्षलाई अगाडि बढाउने,
( छ ) अनुशासित, क्रान्तिकारी मिलिटेन्ट कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माणमा जोड दिने र त्यसका लागि सबै अग्रगामी वामपन्थी एवं क्रान्तिकारी पार्टी संगठन, विचार समुह र छरिएर रहेका क्रान्तिकारी व्यक्तित्वहरुसँग सैद्धान्तिक, राजनैतिक एवं संगठनात्मक एकताको लागि छलफल एवं महान बहसको थालनी गर्ने,
( ज ) अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्ग, विभिन्न देशहरुका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुसँगको भाइचारा सम्बन्ध र एकतालाई व्यापक र ठोस बनाउने, र
( झ ) लडाकु तथा क्रान्तिकारी पार्टीको बिकास गर्ने र नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न आत्मगत अवस्थाको विकासमा जोड दिने आदि।
चीनको ग्रेटवाल सम्बन्धी केही आश्चर्य र रोचक तथ्य